Kenya oo dalka Mareykanka Weydiisatay inay ka tageeraan qabsashada Magaalada Kismaayo
Loading...	Home Wararka Kenya oo dalka Mareykanka Weydiisatay inay ka tageeraan qabsashada Magaalada Kismaayo
Kenya oo dalka Mareykanka Weydiisatay inay ka tageeraan qabsashada Magaalada Kismaayo	Tuesday, 12 June 2012 21:00	Ra'iisul wasaaraha dalka Kenya, Raila Odinga ayaa sheegay maanta in xukuumaddiisu ay weydiisatay Mareykanka iyo ururka Midowga Yurub inay ka caawiyaan qorshaheeda dagaal ee ay ku doonayso inay ku qabsato magaalada dekedda leh ee Kismaayo oo xarun u ah gobolka Jubbada Hoose. Raila Odinga ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay qorsheynayaan dagaalkii ugu dambeeyay oo ay ku doonayaan inay ku qabsadaan degmada Kismaayo ee gobolka Jubbad Hoose ka hor inta aan la gaarin bisha Ogoosto ee sannadka.
Ra'iisul wasaaraha dalka Kenya wuxuu sheegay in deegaannada Al-shabaab ay ka qabsadaan laga dhisi doono wadooyin, iskuullo, guryo iyo xarumo caafimaad si loogu celiyo qoxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Kenya. "Waan awoodnaa inaan gudaha Soomaaliya ka sameyno deegaan, kaasoo qoxootiga Soomaalida lagu celin karo," ayuu yiri Odinga oo intaas ku daray. "Beesha Caalamku waxay doonaysaa inay innaga na caawiso."
Hadalka ra'iisul wasaaraha dalka Kenya ayaa imaanaya iyadoo ciidamada dalkaas ay ku biireen AMISOM toddobaad ka hor, sidoo kalena uu maalin ka hor shil diyaarad ku dhintay wasiirkii ammaanka gudaha Kenya iyo ku xigeenkiisii